बामदेवलाई ओलीको जवाफ : दुइटा पार्टीबीच पो एकता हुन्छ, एउटै पार्टीमा केको एकता ?
एमाले अध्यक्ष एवं दलका नेता केपी ओलीइतर मानिएका चार सांसद आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा देखिए । खनाल–नेपाल समूहका सांसदहरू सोमप्रसाद पाण्डे, जीवनराम श्रेष्ठ, यज्ञराज सुनुवार र कृष्णभक्त पोखरेलले संसदीय दलको बैठकमा भाग लिएका हुन् । उनीहरूपछि कालो गाडीमा उपाध्यक्ष बामदेव गौतम बालुवाटार छिरे । पोखरेल सबैभन्दा अन्तिममा बैठकमा पसेका थिए ।
पार्टीको आन्तरिक विवाद उत्कर्षमा पुगेयता ओली समूहको बैठकहरूमा नदेखिएका पाँच जना एकाएक बालुवाटारमा देखिँदा उनीहरूले कित्ता परिवर्तन गरेको अनुमान कतिपयले काटे । तर, उनीहरू बालुवाटारलाई आ–आफ्नै सन्देश छोड्न त्यहाँ पुगेका थिए ।
पाण्डे, श्रेष्ठ र सुनुवारले ओलीलाई खनाल–नेपाल समूहका ३८ सांसदको हस्ताक्षरसहितको पत्र बुझाए । ‘बैठक तथा निर्णय विधान र विधिसम्मत हुनुपर्ने’ विषयमा पाँच बुँदे माग उनीहरूले दलका नेता ओलीलाई थमाए । खनाल–नेपाल समूहले पार्टी बैठकहरू प्रधानमन्त्री निवासमा नगरेर सम्बन्धित कार्यालयमा गरिए सहभागी हुने सन्देश पत्रमा समेटेको थियो ।
गौतमको चाहिँ पुरानै सन्देश थियो, पार्टीमा एकताको विकल्प छैन । एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईका अनुसार गौतमले आफू कुनै गुट, उपगुटमा नरहेको र एकताकै पक्षमा रहेको बताएका थिए । ‘हामी मिल्नुको विकल्प छैन’, बैठकमा गौतमले भनेका कुरा सुनाउँदै भट्टराईले भने, ‘पार्टी एउटा छ तर दुई समूहमा गतिविधि समानान्तर भइरहेका छन् । म अध्यक्षलाई भन्न चाहन्छु– एकता जोगाउनोस्, मिलेर अघि बढौँ ।’
तर, पार्टी अध्यक्ष ओलीले खनाल–नेपाल नै एकतामा नआएको जवाफ गौतमलाई दिए । ‘तपाईं एकता, एकता भन्नुहुन्छ । देख्नुभयो नि, को एकता चाहन्छ, को चाहँदैन !’, ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै एक सांसदले भने, ‘बाहिरबाहिर कराउँदै, गुटका भेला गर्दै हिँडेकाहरूले नचाहेका हुन् एकता । मैले त संसदीय दल, केन्द्रीय कमिटी बैठकमा आउनोस् भनेर खबर पठाएकै हुँ । भीरबाट लड्ने गाईलाई म काँध हालुँ ?’
त्यसपछि गौतमले असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन अध्यक्षले पहल गर्नुपर्ने बताए । ‘मैले उहाँहरू (माधव नेपाल, झलनाथ खनाल)सँग पनि कुरा गरेको छु, वरिष्ठ नेता भएकाले तपाईंहरूले सहमतिका लागि पहल गर्नुपर्छ भनेर । अब तपाईंसँग त्यही भन्दैछु, तपाईं अध्यक्ष हो, तपाईंले एकताका लागि प्रयत्न गर्नुपर्छ’, गौतमले भने ।
बैठकमा गौतमलाई उपाध्यक्षकै हैसियतमा आसन दिइएको थियो । गत २८ फागुनमा ओलीले पदाधिकारी हेरफेर गरेका थिए । ‘तर, आजको बैठकमा बामदेव कमरेडलाई उपाध्यक्ष भनेर सम्बोधन गरियो’, सांसद पोखरेलले भने ।
किन गए कृष्णभक्त पोखरेल ?
खनाल–नेपाल समूहका ‘खम्बा’ मानिएका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलसमेत आज बालुवाटारमा भएको संसदीय दल बैठकमा देखिए । अधिवक्तासमेत रहेका सांसद पोखरेल तत्कालीन नेकपा विवादमा प्रचण्ड–नेपाल समूहमा थिए । ५ पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद् विघटनविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दिएकामध्ये पोखरेल पनि एक हुन् । नेकपाको नाम विवादमा प्रचण्ड–नेपाल समूहबाट निर्वाचन आयोग धाउनेदेखि जवाफ लेखी पठाउनेसम्मका काममा पोखरेल सक्रिय थिए ।
उनी एकाएक बालुवाटारमा देखिएपछि उनले गुट परिवर्तन गरेको अनुमान कतिपयले लगाए । तर, बैठकबाट बाहिरिएपछि उनले मूल नेतृत्वलाई एकठाउँमा ल्याउने अभियानमा लागेको बताए । शिलापत्रसँग संक्षिप्त संवादमा उनले भने, ‘मैले कसैलाई छोडेको वा कोहीतिर लागेको होइन । एकताका लागि सहजीकण गर्न खोजेको हुँ ।’ आफूले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अलि ठूलो छाती पार्न अनुरोध गरेको उनले बताए । ‘पार्टीमा समानान्तर गतिविधि भइरहेको छ । यसो गर्नुको साटो मूल नेतृत्व एक ठाउँ बसेर कुरा गनुपर्छ । खासगरी प्रधानमन्त्रीजीले छाती अलि ठूलो बनाउनुपर्छ भनेँ’, पोखरेलले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने ‘गुटसँग कुनै छलफल नुहने’ अडान दोहोर्‍याए । ‘व्यक्ति–व्यक्ति आउनुहुन्छ भने छलफल गर्न सकिन्छ’, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै सांसद पोखरेलले भने, ‘बैठकमा नआउने, छलफल गर्न समूह लिएर आउने कुरासँग मेरो विमती हो । छुट्टाछुट्टै पार्टीबीच पो एकता हुन्छ त, एउटै पार्टीमा के को एकता ?’
खनाल–नेपाल समूहले बुझाएको पाँच बुँदे पत्रमा सांसद पोखरेलको नाम छैन ।
एमाले संसदीय दलको विधान संशोधनसहित पारित
एमाले संसदीय दलको बैठकबाट पारित विधानमा के छ नयाँ व्यवस्था ?
एमालेले खनाल-नेपाल समूहका नेतालाई स्पष्टीकरण सोध्‍ने
३८ सांसदको हस्ताक्षरसहित खनाल–नेपाल समूहका तीन सांसदले ओलीलाई बुझाए ५ बुँदे पत्र
संसदीय दलमा ओलीले भने- पार्टीको अध्यक्ष र सदस्यबाट हटाए, धन्न नागरिकता खोसेनन्
खनाल-नेपाल समूहले बहिस्कार गरेको एमाले संसदीय दलको बैठकमा बामदेव सहभागी
बालुवाटार पसेर भनेँ- प्रधानमन्त्रीज्यू छाती अलि ठूलो पार्नुपर्‍यो (कृष्णभक्त पोखरेलसँग अन्तर्वार्ता)
प्रकाशित मिति: शनिबार, चैत ७, २०७७, १७:३४:००